Ireo 5 amboaram-peo tsara indrindra ho an'ny hotely
The 5 Best Brands Hotel Durable
by Misty Foster, mpandray anjara
Ny Marka Hotely Tsara Indrindra
Ny fiainana dia tsara (& maitso!) Ao Sandos Resorts. Sandos Hotels
Ny fahatsapana fifaliana azonao rehefa mivezivezy ao amin'ny trano fandraisam-bahiny trano ianao dia tsy manan-tsahala. Mahafinaritra, mahaliana ary mahaliana. Inona no hitranga ao amin'ny hotely? Ho feno fanatanjahan-tena ve sa fitsaboana amin'ny famerenana amin'ny laoniny? Na mandany ny fotoananao ianao amin'ny fialamboly any amin'ny toeram-pisakafoanana ambony iray, na mampiasa ny efitranonao irery fotsiny ianao mba hametrahana ny lohanao, ny hotely tsara dia afaka mamorona fiantraikany maharitra amin'ny fotoananao any amin'ny toerana iray.
Ny hotely izay mamela fahatsapana tsara sy maharitra dia zavatra iray foana hankalaza. Ny fitadiavana hotely iray izay mampifandray ny fahafaham-pon'ny tsirairay amin'ny fiantraikany ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana, dia zavatra hafa tanteraka.
Ny fikambanan'ny tontolon'ny fiarahamonina manerantany dia vao haingana no nanambara ny 2017 ny taona hanaovana ny dingana maharitra. Miaraka amin'izany, mieritreritra ny ho avy ny trano fandraisam-bahiny mba hampidirana ireo làlam-pifandraisana manan-danja amin'ny tetik'asa manan-danja eo amin'ny sehatry ny vahoaka. Avy amin'ny fambolena an-tanan-dehibe mankany amin'ny tontolo ara-tontolo iainana sy ny famolavolana, ny indostrian'ny fandraisam-bahiny dia manangana ezaka hananganana tontolo iray maharitra kokoa. Ireto ny marika lehibe momba ny hotely maharitra sy ny fomba hanampiana azy ireo hamolavola ny fenitra indostrialy.
Tsidiho ny tranokala 1 Hotel ary ho hitanao avy hatrany ny fanoloran-tenany ho an'ny tontolo iainana. Ao amin'ny pejin-tranonkala, manasongadina lahatsary avy any amin'ny toetr'andro ny horonantsary fijerena fijerena horonantsary ary mametraka ny feon'ireo zavatra iainanao: ny natiora. Izy io no lohahevitry ny marika ary io dia mitomany any amin'ny lafiny rehetra amin'ny fialàn'ny vahiny ao amin'ny iray amin'ireo hotely sexy. Ny trano fandraisam-bahiny dia miavaka amin'ny hazo voajanahary, hazavana voajanahary, matavy fanosotra ary fotoana iainana maitso. Mino izy ireo fa ny hoavin'izao tontolo izao sy ny ho avy ny fahaiza-mandray vahiny dia iray ihany ary mety ho mpanohana ny fiovana. Na dia manana toerana ao NYC, Brooklyn, sy Miami amin'izao fotoana izao aza izy ireo, dia mihamitombo haingana izy ireo ary voavolavola ho marika erantany manamarika.
Ny fomba fijerin'ny Hyatt Regency ao Vancouver. Hyatt Regency Vancouver
Rehefa mieritreritra an'i Hyatt ianao dia mety tsy hampifandray azy ireo avy hatrany miaraka amin'ny faharetana, fa ianao kosa dia hanao azy ireny ho tsy sembana. Hyatt dia manana isa 57% amin'ny ankapobeny CSR amin'ny hetsika ataon'izy ireo, izay tena mahavariana tokoa amin'ny fivarotana lehibe. Manana tetik'asa fampandrosoana ara-tontolo iainana miaro ny tontolo iainana amin'ny 2020 izy ireo mifantoka amin'ny fitantanana, ny fako sy ny fihenan'ny rano ary ny fandraisana anjaran'ny mponina. Ankoatra ny fanoloran-tenany momba ny tontolo iainana, dia mirehareha ny fandaharan'asam-pandraharahana ankapobeny izy ireo antsoina hoe, Hyatt Thrive. Amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa, ny tatitra, ary ny fampandrosoana ny mpiasa, dia mitana andraikitra eo anatrehan'ny fenitra avoakan'ny indostria izy ireo. Mamporisika ny mpiasa handray mpiasa an-tsitrapo ao amin'ny fiarahamonina izy ireo ary mifandray mivantana amin'ny fikambanana serivisy maromaro. Ny hoavin'I Hyatt dia iray am-pitiavana amin'ny fandraisana andraikitra ara-barotra, tontolo iainana sy ny fiaraha-monina.
Ny programa Planet21 dia manova ny faharetan'ny hotely araka ny ahafantarantsika azy. Accor Hotels
Fairmont, Swissotel sy Raffles vao haingana no nanatevin-daharana ny fianakavian'ny Accor Hotel. Ny tena mahavariana indrindra, ankoatra ny fahaiza-mandray vahiny mahagaga, dia programa Planet 21 an'ny Accor. Fairmont dia efa mpitarika hatry ny ela hatry ny ela ary raha mbola mifamatotra amin'i Accor izy ireo, dia mety hiditra ao amin'ny programa Planet 21 izy. Araka ny tranonkalany, "Ny fandaharan'asa Planet 21 dia maneho ny tanjon'ny tetik'asa ao amin'ny Vondrona amin'ny taona 2020, mifototra amin'ny laharam-pahamehana eo amin'ny laharam-pahamehana: miara-miasa amin'ireo mpiasany, mandray ny mpanjifany, manavao ny mpiara-miasa aminy ary miara-miasa amin'ny fiarahamonina ao an-toerana. Ny olana fototra roa hiadiana amin'izany dia ny sakafo sy ny trano. " Ny dikan'ity dikanteny ankehitriny ity dia amin'ny fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny fananahana ny fananahana ny ankizy-fanandevozana, ny fampiharana ny vokatra eco-certificated eco-certified; ary amin'ny famokarana sakafo maharitra amin'ny trano fisakafoanana any amin'ny hotely. Iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny mahatalanjona indrindra, ny Pullman Airport ao Auckland dia manana rindrina namboarina ao amin'ny toby ary miasa am-pahavitrihana amin'ny fomba hiadiana amin'ny fako.
Ny toeram-ponenana rehetra dia manamboninahitra malaza amin'ny famoronana fako. Sandos dia afaka manova ny lalao ho an'ireo izay maniry ny traikefa amin'ny zava-drehetra ary maniry ny handao ny dingana kely kokoa momba ny tontolo iainana. Ny fahitan'izy ireo dia ny "To be leaders in all-inclusive resorts that are differentiated, innovative and sustainable". Ahoana no fomba hanatanterahany izany? Miasa mivantana amin'ireo mpamatsy sy mpiasa ho fampandrosoana maharitra. Ao anatin'ny orinasa, manana kolontsaina fanabeazana sy andraikitra ara-tsosialy izy ireo ary mifantoka amin'ny "fiarovana ny lovan'ny tantara, ara-boajanahary ary ara-kolontsaina ary mandrisika ny fampandrosoana ny fiarahamonina." Ankoatr'izay dia manolo-tena izy ireo hitazona ny fandraisam-peo ao an-toerana ary hahatsiaro ny lahy sy ny vavy vitsy an'isa fanavakavahana. Sandos Caracol Eco Resort dia toeram-pisakafoana mifototra amin'ny alikaola izay miorina eo afovoan'ny rivotra mahatsiravina any Riviera Maya, Meksika. Ny toeram-pitsangatsanganana dia manohy mampiroborobo fomba fanao mahazatra ary mampifandray ny tontolo iainana voajanahary amin'ny alalan'ny fampisehoana ireo tours sy hetsika maro mahasalama momba ny tontolo iainana isan'andro amin'ny alalan'ny Xcalacoco Experience. Indreto misy sasantsasany amin'ireo hetsika natombok'i Sandos Caracol mba hanohanana ny tanjony maharitra:
1) Ny fanodinana indray, ny fiarovana ny rano ary ny fandaharanasa herinaratra
2) Sandos Eco Club - vondrona mpanazatra maromaro mampihatra ny tontolo iainana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny. Est. 2009
3) efitrano "Green", izay efa naverina efitrano tao amin'ny efitrano "maitso" amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana marihitra, tariby LED, rafitra fanodinana volon-koditra sy rano fisotro, ary tsy mampiasa gazy voa-drano intsony izy ireo. Miaraka amin'ireo fiovana ireo, dia nampihena ny fatran'ny CO2 tamin'ny 70%.
4) Fandaharan'asam-pambolena miverimberina
5) Zavamaniry sy zaridaina eny an-tsaha
6) Fandaharan'asam-pamokarana an-tsokosoko ho an'ireo biby tandindomin-doza.
A lobby Kimpton mafana sy maitso. Kimpton
Kimpton dia mampody ny fun funky funky! Matetika izy ireo no lazaina hoe "trano fandraisam-bahiny tsara indrindra" ao Etazonia. Tsy ny toerana misy azy ireo ihany no nahatonga azy ireo hanana endrika sy toe-tsaina tsy manam-paharoa. Ny fandaharan'asa Kimpton Cares dia miompana amin'ny hoe ireo singa ireo dia ao anatin'ny ADN ao amin'ny hotely. Ny fanamarinana ny fandaharan'asa Eco-Rating Green-Key dia ohatra iray amin'ny hoe inona no mahatonga azy ireo hijoro. Ny dingana manan-danja azon'izy ireo hananganana tontolo tsara kokoa dia ny fankalazana ny fahasamihafana. Manohana ny vondrom-piarahamonina LGBT amin'ny tetikasa Trevor izy ireo ary manome hery ireo vehivavy amin'ny alalan'ny Dress for Success. Ny teboka Kimpton dia mamirapiratra amin'ny andraikiny ara-tsosialy.
Ny indostrian'ny hotely dia mivoatra sy miovaova hatrany. Amin'ny fisafidianana ny famerenana ny fijanonana any amin'ny trano fandraisam-bahiny izay mampiroborobo ny faharetana, manampy ny mamolavola ny fenitra amin'ny ho avy ianao. Manoro hevitra anao hanao ny fikarohana ianao ary mitady orinasa mifanaraka aminao.
Ahoana ny fijanonana ny Green amin'ny faritra rehetra
Ny Faritry ny Harambato Barry Lehibe: Tokony Handeha ve Ianao?
New Cousteau eo amin'ny Eco-Tourism Front
Fomba tsotra hivezivezy Green
Inona no modelin'ny modelin'ny singa iray ho an'ny tsirairay mikasika ny andraikitra ara-tsosialy
Toeram-pampandrosoana maharitra mora vidy
Arizona State University Logo Apparel sy Fanomezana
Torohevitra mahasoa: Fiaramanidina Safidy sy Fiara Mitandrema amin'ny ankizy
Ny niandohan'ny koveta kilaoty
Ny tanàna mahagaga mahatalanjona indrindra
Ny fitsidihana tsara indrindra avy any Seville
DIY fisarahana ao Arizona
Scandinavia tamin'ny volana Desambra
Sarobidy ve ny karatra Madrid?
Fikirakirana ny trano fialantsasatra ao New York City